Manchester City oo baacsaneysa xiddig muhiim u ah Barcelona iyadoo loollan kala kulmeysa Bayern Munich – Gool FM
(Manchester) 26 Okt 2021. Naadiga Manchester City ayaa wali raadineysa xiddigo ka ciyaara khadka dhexe suuqa xagaaga soo aaddan iyadoo tababaraheeda Pep Guardiola uu markan dareenkiisa u weeciyay kooxdiisii hore ee Barcelona oo uu ka doonayo xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Frenkie de Jong.
Wargeyska Calciomercato ayaa sheegay inay Citizens bartilmaameed ka dhiganeyso De Jong si ay khadkeeda dhexe ugu xoojiso maadaama dhammaadka xilli ciyaareedkan uu kooxda si bilaash ah kaga tagi karo Fernandinho maadaama uu qandaraaskiisa dhacayo.
Wararka ayaa intaas ku daraya inay Bayern Munich sidoo kale xiiseyneyso adeegga raace-dhisaha reer Netherlands kaasoo xubin muhiim ah ka Barca.
Si kastaba ha ahaatee, 24-sano jirkan ayaa xagaagii 2019 Blaugrana kaga soo biiray naadiga Ajax ee dalkiisa ka dhisan waxaana tan iyo markaas uu hal-door ka yahay shaxda kooxda ku ciyaarta Camp Nou waxaana la fahansan yahay inaysan Barcelona si fudud ku iibineyn da’yarkeeda.
Bruno Fernandes oo hoggaaminaya xiddigaha doonaya in xilka laga tuuro tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer… (Miyuu ku jiraa CR7?)